Buddha Words and Knowledge Archives - Tameelay
သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ အတွေး (ဖတ်ကြည့်နော်…)
February 23, 2020 Tameelay 0
တစ်ခါတုန်းက…ရွာတစ်ရွာမှာ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကျောင်းထိုင်နေပါတယ်။ထိုကျောင်းမှာလည်း ကိုရင်လေးနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့။ ကိုရင်လေးနှစ်ပါးဟာရွာထဲက ဆွမ်းချိုင့်တွေကို ယူရပါတယ်။ကျောင်းနဲ့ ရွာရဲ့ ကြားမှာလည်းတောတွေ ခြုံတွေက ပေါတယ်တဲ့။ ကိုရင်လေး နှစ်ပါးဟာရွာထဲက ဆွမ်းချိုင့်တွေ ယူလာ။ပြီးတော့ အဲဒီခြုံတွေထဲ ဝင်ပြီးကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ ဆွမ်းဟင်းတွေကိုခိုးစားကြပါတယ်။ ထိုအခြင်းအရာကို…ကျောင်းဒကာတစ်ယောက်ကမြင်တွေ့သွားပါတယ်။ပြီးတော့…ဒေါသလည်း ထွက်သွားပါတယ်။ ဒီကိုရင်တွေ ဒီလိုလုပ်တာကိုဆရာတော်ကြီးကို တိုင်မှ ဖြစ်မယ်။ပြီးတော့မှတ်လောက်သားလောက် ဖြစ်အောင်ရိုက်ပြီးတော့ ဆုံးမခိုင်းမယ်ပေါ့။ […]
စိတ်ညစ်လာရင် . . . ဂုဏ်တော်ပွားပါ ၊ မေတ္တာပွားပါ
February 21, 2020 Tameelay 0
စိတ်ညစ်လာရင် ခါးကို ဖြောင့်ဖြောင့်ထား … မျက်လုံးလေးမှိတ် …လက်အုပ်ကလေးချီပြီး ငါးပါးသီလကို ယူလိုက်ပါ တစ်ဆက်တည်းပဲ – “မြတ်စွာဘုရား၊ ဘုရားတပည့်တော် ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို သီတင်းသုံးတော်မူ ပါဘုရား”လို့ ပင့်လိုက်ပါ … ကိုယ်က အမျိုးသမီး ဖြစ်နေလို့ ပင့်ရမှာ အားနာနေရင်လည်း ဦးခေါင်းထက် ကို ပင့်လိုက်ပါ […]
”ဘဝမှာ ကိုယ်ရထားတဲ့ အရာလေးတွေဟာကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်သန့်မှ တန်ဘိုးရှိတာပါ။”
February 20, 2020 Tameelay 0
လိပ် ပြာ သန့်ပါစေ။ ”ဘဝမှာ ကိုယ်ရထားတဲ့ အရာလေးတွေဟာကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်သန့်မှ တန်ဘိုးရှိတာပါ။” ကိုယ်ရထားတဲ့ ဂုဏ်တွေ၊ကိုယ်ရထားတဲ့ ငွေတွေ၊ကိုယ်ရထားတဲ့ ရာထူးဌာနန္တရတွေ၊ကိုယ်ရထားတဲ့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွေဟာရိုးသားမှုကိုအခြေခံ တကယ့်ကို အစစ်အမှန်ကြိုးစားမှုနဲ့ ရထားတာဆိုရင်တော့တွေးတိုင်းတွေးတိုင်း ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုတွေ၊ အားအင်တွေ၊ စိတ်သန့်ရှင်းမှုတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့် … ရိုးသားမှုမရှိ၊ အရည်အချင်းမရှိ၊ကိုယ့်စွမ်းအားမပါဘဲ အမှီကောင်းလို့၊ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်လို့၊ ဟိုဟာကြောင့် ဒါကြောင့်ရလာတာဆိုရင်တော့ တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းသံသယတွေနဲ့ […]
လူ့အဆင့်အတန်းကို …တိုင်းတာတဲ့ ပေတံဟာ တရားဓမ္မပါပဲ
လူ့အဆင့်အတန်းကို …တိုင်းတာတဲ့ ပေတံဟာ တရားဓမ္မပါပဲ လောကသတ်မှတ်ချက်အရ … နိမ့်တဲ့အခြေအနေ မြင့်တဲ့အခြေအနေဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိရှိ တရားဓမ္မနဲ့ ညီတဲ့ အပြုအမူကို ပြုတဲ့သူတရားဓမ္မနဲ့ညီတဲ့ အပြောအဆိုကို ပြောတဲ့သူ တရားဓမ္မနဲ့ညီတဲ့ အတွေးအကြံကို တွေးတဲ့သူဟာအဆင့်အတန်းရှိတဲ့လူပါပဲ။ လောကအဆင့်အတန်းမြင့်ပေမယ့် …… ဓမ္မအဆင့်အတန်းနိမ့်ရင်အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့သူ လောကအဆင့်အတန်း နိမ့်ပေမယ့်ဓမ္မအဆင့်အတန်းမြင့်ရင် ……အဆင့်အတန်းရှိတဲ့လူလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက […]
မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် ဆွမ်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီမီး ကပ်လှူပူဇော်ရာ၌ ဘာမျှ ရွတ်ဆိုခြင်း မပြုဘဲ တင်ထားပူဇော်ခြင်းမှာ ကုသိုလ်ဖြစ်၊ မဖြစ်
မရွတ်ဆိုဘဲကပ်လှူခြင်း အရှင်ဘုရား မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် ဆွမ်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီမီး ကပ်လှူပူဇော်ရာ၌ ဘာမျှ ရွတ်ဆိုခြင်း မပြုဘဲ တင်ထားပူဇော်ခြင်းမှာ ကုသိုလ်ဖြစ်၊ မဖြစ် သိလိုပါသည် အရှင်ဘုရား။ ။ ဦးစောမောင်၊ မကွေးမြို့ ။ ဘုရား၌ ဆွမ်းစသည် ကပ်လှူပူဇော်ရာ၌ ဆွမ်းကပ် ပူဇော်စရာ စသည်များကို […]
“တစ်ကယ်တော့ အရှုံးပေးတာက အနိုင်ရလိုက်တာနော်”
သည်းခံခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကုသိုလ်အရနည်းတယ်..မေတ္တာထားခြင်း သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့်မိမိက အရှုံးပေးလိုက်တာဟာ အနိုင်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်.. သည်းခံပြီး တုန့်ပြန်မှုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်းခံခြင်းတရားလက်ကိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင် အနိုင်ရတာပါ.. စိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကိုတုန့်ပြန်ပြီးတော့ စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်နဂိုစိတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက် ပိုမိုက်မဲရာရောက်တယ်.. ဒေါသကို ဒေါသနဲ့ပြန်တုန့်ပြန်ရင် ပိုမိုက်မဲရာရောက်တယ်..သူတစ်ပါးက ကိုယ့်အပေါ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ သိလို့ရှိရင်သတိနဲ့ မေတ္တာနဲ့ ခန္တီနဲ့ ဒီလိုသည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပဲ တုန့်ပြန်ပါ..တစ်ခြားနည်းနဲ့ မတုန့်ပြန်ပါနဲ့.. အဲဒီလို တုန့်ပြန်ခြင်းကိုလောကလူသားတွေက အရှုံးလို့ထင်ကြတယ်..တစ်ကယ်တော့အောင်နိုင်ခဲတဲ့ စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုကို […]
February 16, 2020 Tameelay 0
ဂုဏ်တော်များကို ကြည်ညိုဖို့ဆိုရင် ဂုဏ်တော်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိရမယ်၊ သိထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း ထပ်တလဲလဲ ပွားများရပါမယ်။ ပါဠိသက်သက် ပွားများရမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ်သိထားတဲ့ မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ်တွေကို ထပ်တလဲလဲ ပွားများရမှာ၊ ထပ်တလဲလဲ စဉ်းစားရမှာ။ ပါဠိသက်သက်ရွတ်ပွားတာ မှားတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး၊ မှန်ပါတယ်၊ ကုသိုလ်လည်း ရသင့်သလောက် […]
” ဘာပဲလုပ်လုပ် ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိ “
ကိုယ်ကျင့်သီလနဲ့ ပြည့်စုံလိုသူတွေ လိုက်နာရမယ့်အကြောင်းအရာ တစ်ခုက . . “လောကမှာ မကောင်းမှု ပြုဖို့အတွက် ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်မရှိဘူး” လို့ နှလုံးသွင်းထားလိုက်ခြင်းပါပဲ။ လောကမှာ မကောင်းမှု ပြုဖို့အတွက် ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သတ္တဝါတွေ ဆိတ်သုန်းတဲ့ နေရာ ဆိုတာ […]
မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်“သစိတ္တ ပရိယောဒပနံ” ကိုယ့်စိတ်ကလေးကို ဖြူစင်အောင်ထားတဲ့။ စိတ်ဖြူစင်တယ် ဆိုတာညစ်နွမ်းတဲ့စိတ်တွေမရှိသင့်ဘူး။ ညစ်နွမ်းတဲ့ စိတ်ဆိုတာ ဘာတုန်း? လောဘဆိုတဲ့ အညစ်အကြေး၊ဒေါသဆိုတဲ့ အညစ် အကြေး၊မောဟဆိုတဲ့ အညစ်အကြေး၊မာန်မာနဆိုတဲ့ အညစ်အကြေး၊ ဣသာဆိုတဲ့ အညစ်အကြေး၊ မစ္ဆရိယဆိုတဲ့ အညစ်အကြေး၊ အဲဒီတရားတွေ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာပြီဆိုရင် စိတ်ဟာ ညစ်နွမ်းသွားတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ […]
အပြောအဆိုမှာ ကိုယ်တိုင်စည်းကမ်းရှိပါ မေတ္တာနှလုံးပျက်သွားတာ ကိုယ့်ရဲ့ အပြောကြောင့်ပဲ။ မပြောသင့်တာကို ပြောမိလို့၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောမိလို့၊ မဟုတ်တာ သွားပြောမိရင်လည်း ပြဿနာတက်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အပြောအဆိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စည်းကမ်းရှိဖို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ဟောကြားပေးထားတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတွေက လက်တွေ့လိုက်နာ ကျင့်သုံးဖို့ ဟောထားတဲ့ တရားတွေချည်းပါပဲ။ […]